ravatorano | Ankapobeny
Sarasara tsy ambaka daholo ary isika mianakavy mamaky eto e ! Iaraha mahalala izany fa dia nanao sonia ny tondrozotra na ravin dalana izay napetraky ny vondrona SADC ny mpanao politika malagasy.Ny tena mahalasa ny sain ny mpanara baovao dia ilay andalana faha 20 ihany e izay mikasika ny...
Ela izay tsy nanoratako tamin'ity blaogiko ity zay;ny fotoana mihitsy no tsy nisy ary amizao somary manararaotra kely miditra eto. Henjana mihitsy mantsy amin'izao ny fandehan'ny raharaham-pirenena satria izay neverina mba hamihiratra ny fiainam-bahoaka indray amizao no mitavozavoza fitondra ka...
Vao tsy ela dia tonga indray ny fanambarana fa teraka izao ny firehana faha dimy izay Ingahy Monja Roindefo no mitarika azy satria olona nanohana sy avy ao amin'ny antokony avokoa ireo tena mpikambana mafana fo ao anatin'izany. Atao inona ary io firehana faha dimy io ? Raha ny...
Tany anaty taxibe aho no nandre ny vaovao omaly maraina raha nilaza ry zalahy ao amin'ny kidaoana maraina hoe maty i Rado.Taitra ihany ny tena ary tena nalahelo tokoa na dia hoe efa "nahavita ny fihazakazahany" aza izy amin 'izao fiainana mandalo eto izao. Tsy hay ny tsy...
Bakalôrea eto Antananarivo Mbola mety hisy mpianatra ho afaka Mbola mety hiampy indray izany ny isan-jaton’ny mpianatra ho afaka bakalôrea eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo. Mbola mety hitombo ny isan’ny mpianatra ho afaka...
1 2 3 4 5 6 7 Manaraka»